China Mpempe akwụkwọ na-anya ụgbọ mmiri. Enwere m ike itinye ụdị nri? Nlụpụta na ụlọ ọrụ | Lenda
AKW BKWỌ AH BR R EGO. Enwere m ike itinye ụdị nri?
N’oge na-adịbeghị anya, onye na-eji ụgbọ ala eletrik kwulitere ụdị ajụjụ a: bicyclegba ígwè eletrik eletrik m zụtara na-egbu oge. Enwere m ike ịgbakwunye batrị iji mee ya ngwa ngwa? Maka ajụjụ a, azịza nke ụlọ ọrụ Motorow-Tech na-azụ ahịa ọrụ mgbe azụmaahịa bụ na ọ gaghị ekwe omume ịgbakwunye batrị maka isi ihe anọ.
Nke mbu, ogha oke batrị, enweghi ike igbakwunye batri ohuru
Onye ọ bụla maara na e jiri nlezianya hazie batrị tupu ha ahapụ ụlọ ọrụ ahụ, gụnyere nha igbe batrị. Naanị mgbe emere batrị ahụ ka mmiri na-agbapụta na-enweghị mmiri ọ bụla. Iwere igwe keke eletriki 48V dika ihe ima atu, enwere ya obere batiri 12V, ya na igbe batri nwere ma nwee ike ịnabata batrị 4. Ọ gaghị ekwe omume ịtinye batrị ọhụụ.
Nke abụọ, mba mba maka ụgbọ ala amachiri amachibidoro, ịnya ụgbọ ala eletrik tinyere batrị ọhụrụ agbakwunyere na nke ya enweghị ike ịdị n'okporo ụzọ.
N ’usoro ọhụụ nke mba, batrị nke igwe eletriki igwe anaghị agafe 48V. Ọ bụrụ na ndị ọrụ chọrọ ịgbakwunye batrị ọhụrụ, o doro anya na ha anaghị erube ọhụụ nke mba ahụ, a ga-atụkwa ụgbọ ala eletrik dị ka ụgbọ ala ọkọlọtọ. Ọ bụrụgodị na onye ọrụ ahụ enweta akwụkwọ ikike, ụgbọ ala eletrik dị otú a ka enweghị ike ịnụ ụtọ ụzọ, nke bụ ịgbanwe iwu na-akwadoghị. Eleghi anya otutu ndi mmadu choro ikwu, can nwere ike kuta udiri ugboala a dika ugboala eletriki? Azịza ya bụ mba. Ya mere, malite ugbu a, a gaghị ana batrị eletrik nwere batrị.
Nke atọ, ọnụego ọdịda nke ụgbọ ala eletrik na-enweghị batrị dị elu
Na ntụle, anyịnya igwe na-agba nwayọ nwayọ, na ịgbakwunye batrị nwere ike ịme ha ngwa ngwa. Agbanyeghị, n ’ụzọ si ele ihe anya, ịtinye batrị nwere ike gbaa ọkụ ma ọ bụ onye njikwa ahụ, na-eme ka ọdịda nke ọkụ eletrik dị elu. Nke a pụtara na ọ bụrụ na aga-agbakwunye batrị, ọgba tum tum na onye na-achịkwa ya kwesịrị ịgbanwe ma kwekọọ. Site n'echiche a, ọghọm nke ịgbakwunye batrị karịrị nke ọma, ma ọnụ ahịa ya karịrị akarị, yabụ ị nweghị ike itinye batrị.
Anọ, bọọdụ eletriki agbakwunyere na batrị na-enweghị ikike nwere nnukwu ihe ize ndụ nchekwa
Ọ na-abụkarị ụzọ akụkụ abụọ. Nke mbu, igwe anwukwo eletriki nke nwere batara nke gbara onwe gi nwere obi ojoo na nsogbu ndi ozo. Nke abụọ, batiiki eletriki nke batrị agbakwunyere na ikike nke nkwa atọ. Ọ bụrụ na nsogbu dị n'ụgbọ ala eletrik, enwere ike idozi ya na ụgwọ nke aka ha. Ya mere, bọọdụ eletriki na-eji nwayọ nwayọ, ma ịgbakwunye batrị agaghị arụ ọrụ.
Na nkenke, ịzụlite ngwaahịa teknụzụ dị elu gburugburu ebe niile bụ ebe ndị isi na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ Motorow-Tech. Puru iche n’ichepụta, imepụta na azụmaahịa maka skooters eletriki, e-igwe, hoverboards na skateboards. Site na isi ihe anọ a, anyịnya igwe eletriki na -adịghị ọsọ Ọsọ, enweghị ike ịgbakwunye batrị. N'ezie, ọ dịghị mkpa ka ndị ọrụ iwelie ọsọ site na ịtinye batrị. Dabere na ọnọdụ ahịa dị ugbu a, enwere ike iji moto eletrik na moto eletriki n'okporo ụzọ.